Home » Prieglobos vadovai
09.05.2020 Category: Prieglobos vadovai
* Mmelite: Ezinyere eziokwu na stats ụlọ ọrụ ọhụrụ.
G laghachi az 1985 m. Mgbe aha aha mbụ svetainėje mg mg ah, intanet achọpụtawo ọganihu dị ukwuu nke ngalaba aha njikwa.
Akụkọ Verisign na-ekwu na ụlọ ọrụ ngalaba na (2013 m.) (Q3) Naujų 5,1 proc. eto.
Nyere otu mkpa dijitalụ dị n’etiti ọha na eze nke oge a, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya, ma ọ bụ nnukwu ụlọ ọrụ nchịkwa ma ọ bụ otu onye na-ahụ maka dijitalụ, iji nweta aha nga.
Ma ànyị na-achọ ya ma ọ bụ na ọ bụghị, ịnweta ngalaba nke edebara aha gị n’akwụkwọ bụ ihe dị mkpa.
Ọ bịrụ na ịnweghi otu ma, maọbụ naanị chọrọ obere nduzi na aha ngalaba, wee na-agụ ihe. Anyị ga-ekekọrịta nkọwa gbasara otu esi azụ ma denye aha ọhụrụ maka ndị na-amalite!
WHSR nweta ụgwọ ntinye akwụkwọ site n’aka ụfọdụ ụlọ ọrụ ndị a kpọtụrụ aha na isiokwu a. Ọ na e we ụ ụ ụ mg ị na ego iji mep meta ọdịnaya bara uru dị ka nke a – kwadoro nkwado gị nke ukwuu.
1 Kedu aha ngalaba?
2 Aha Aha Aka
3 Geriausi „ngalaba Aha“ generatoriai
3.1 1 – domenas
3.2 2 – „Wordoid“
3.3 Aha 3 – Aha
3.4 4 – taškas
3.5 5 – Achọpụta ngalaba ngalaba
3.6 6- „Shopify“ verslo pavadinimo generatorius
4 Ego ole ka ịkwụ ụgwọ maka ngalaba aha ọhụrụ?
4.1 Ego ole ka ngalaba aha ga-efu m?
5 Olee otú ịzụta aha ọhụrụ ngalaba si na-edeba aha?
5.1 1. Lelee maka nnweta nnweta
5.2 2. Debanye aha gị na ngalaba aha na ngalaba na-edeba aha
6 Ebe kacha mma ịzụta ngalaba
6.1 Mmelitas: Debesų liepsna dị ka ngalaba Aha na-edeba aha
7 Kedu otu esi zụta aha aha dị ugbu a n’aka onye nwe ya?
7.1 Kedu aha ngalaba aha?
7.2 Otu esi zụta ngalaba site n’iji ntu
7.3 Esi chọpụta uru nke onye nwechara aha ngalaba
7.4 1- Iji Na-ere Ndenye Ahịa
7.5 2- „Iji Ngwudata Atụmatụ Ntanetị Online“
8 Debe na ngalaba, wee banye ọrụ
Kedu aha ngalaba?
Mgbe ịchọrọ ịmalite mkpokọta weebụ, ịkwesịrị inwe ngalaba aha. Ma ihe heck bụ aha ngalaba ọ bụla?
Ọ bụ isi okwu nke okwu a na-apụghị ịghọta na, mgbe ịdebere na ihe nchọgharị ahụ, redire onye ọrụ na IP gị.
Ị na-ahụ, mgbe e kere weebụ, ọ na-abịakarị na adreesị pụrụ iche a maara dị ka ngalaba Aha Serveriai (DNS) nke na – adịkarị ka nke a:
Nke a siri ike ịmalite ma bido. Nke bhe ihe ngalaba aha pụrụ iche ga-adị mfe maka ndị ọrụ iji cheta ma pịnye.
Maka nkọwa nkọwa ndị ọzọ banyere ngalaba aha, biko gwaa ndu Jerry.
Aha Aha Aka
Aha ngalaba gị bụ njirimara gị. Ọ bụ otú ndị mmadụ si achọta gị, aha ndị ahịa na-enyefe ndị ọzọ.
O doro anya na ọ dịghị ihe dị mkpa karị.
Nye gị azụmahịa a nzọụkwụ na ezi ntụziaka maka buru zuru ngalaba aha – ebe a bụ ole na ole Atụmatụ na otú e si chọta jụụ ngalaba aha.
Debe ya dị mkpụmkpụ ma dị mfe icheta (ngalaba anyị "Paskelbta žiniatinklio prieglobos paslaptis" bụ ihe ọjọọ!)
Zere aha ahia
„Nweta“ .com ma ọ bụ .net mgbe ọ b enla buvo vienodi
Atụla egwu ịkebe okwu ma ọ bụ jiri okwu mejupụtara (chee – „FaceBook“, „YouTube“, „Google“, „LinkedIn“)
Dee ya ma gụọ ya ugboro ugboro tupu ịzụta (ihe atụ – kpachara anya ma ọ bụrụ na aha azụmahịa gị bụ "„Dickson Web“")
Okwu dm mpa *
* Mara: needchọghị isiokwu okwu na ngalaba aha gị iji bulie nke ọma na Google n’oge a. Mana ọ bụ ezigbo echiche ịkọ isiokwu ngalaba gị na isi okwu gị dị ka ọ ga-enye ndị ọbịa oge mbụ echiche ngwa ngwa ihe weebụsaịtị gị gbasara.
Geriausi „ngalaba Aha“ generatoriai
Ịkpọ ebe nrụọrụ weebụ nwere ike ịbụ ezigbo nsogbu, karịsịa ma ọ bụrụ na ị bụ ọhụrụ na weebụsaịtị na ịmepụta ihe. Ma ọ bụrụ na ị dị ka m, we re re ike ike ji ji ụ ụ ụụụụụụụụụụụụụụịịụụụ, cheị u na na, naanị, iji, mejupụta, ndepụta, nke, crappy.
Ebe a ụ na na na ole n n ha ha ha ha gene rators rators i i i ji ị ị ị ị ị ị ị ị ic ic ic ic ic n n ga ga ga ga e e e e ch ch ch ch ch.
* Pịa oyiyi iji hụchalụ ihe ndị na-esonụ na ngalaba ngwaọrụ.
1 – domenas
Domeno valdytojas, gavęs savo žinią, kad kūrybiškumas yra svarbiausias dalykas, nes jis yra žinomas kaip pagrindinis puslapis apie „gitarą“. Gaa na: Domainr.com
2 – „Wordoid“
Ndị ọrụ Wordoid na-aga ịmepụta aha ndị na-enweghị aha ma ọ bụ tinye isiokwu iji jiri ya mee ihe. Gaa na: Wordoid.com
Aha 3 – Aha
Aha Aha na-edepụta aha atsitiktinis vyras, na-enweghị mkpokọta mkpokọta. Gaa na: AhaStation.com
4 – taškas
Dot-o-mator bụ ngwá ọrụ dị mfe nke jikọtara okwu abụọ iji mepụta aha ọhụrụ. Gaa na: Dotomator.com
5 – Achọpụta ngalaba ngalaba
Lean ngalaba Ieškokite nyocha ọchụchọ dị mfe maka ịchọta aha ngalaba dịnụ. Ngwaọrụ ahụ na-enyere ndị ọrụ dar žinomas kaip ịchọta ngalaba aha site na ịchọta okwu ọchụchọ na isiokwu ndị ọzọ a na-ahụkarị na ngalaba aha. Naujų „Automattic“ (visos „WordPress.com“) 2013 m. Nėra. Gaunama: LeanDomainSearch.com
6- „Shopify“ verslo pavadinimo generatorius
„Shopify“ ir „Business Name Generator“ yra žinomi kaip „n’nwa azụmahịa aha na lelee ngalaba aha nnweta“. Malite site na ịhọrọ isiokwu ị chọrọ ka ngalaba gịnye, ị ga-enweta ọtụtụ narị aro. Gaa na: „Shopify“ verslo vardų generatorius.
Ego ole ka ịkwụ ụgwọ maka ngalaba aha ọhụrụ?
Ndenye aha na ntinye ohuru na-adabere nke ukwuu na ndọtị ya (amara dị ka TLD). Na, bet ne „NameCheap“, o .com nagaba na-akwụ ụgwọ $ 10.98 / m. Per mane me ọhụrụ na otu ọnụahịa. „N’aka nke ọzọ“, stulbinantis JAV dolerių pasirinkimas 4,99 USD / atgal, už 48,88 USD / afi iji megharịa.
Ya just, tupu ị gaa n’ihu wee nweta aha ọhụrụ aha, ejiri m n’aka na enwere ajụjụ gbara ọkpụrụkpụ ịchọrọ ịjụ. Nke ahụ bụ:
Ego ole ka ngalaba aha ga-efu m?
Azịza ya? Ọ dabere.
O di nwute, rašyk, kad tu niekad ne taip, kaip ikpebi ugwo aha aha. Ụfọdụ n’ime ihe ndị ahụ nwere ike ịbụ:
Mgbakwunye nke ngalaba aha (čia: .com, .shop, .me)
Ebee ka e si zụọ ngalaba aha na (nd n na-edebanye aha dị iche iche dị iche iche)
Ogologo oge ahụ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ ị dar nebuvo panašus į ịchọrọ (atụ: ịgbakwunye nzuzo ngalaba, ịga maka ọtụtụ afọ, wdg.)
Ụ ụ ụ ie ie—ọ ọ ọ ọ ọ ọ we we we we we we we we we we ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti iti $ $ bụ pụrụ iche n’elu ikpo okwu na-enye.
Ụkpụrụ isi nke ọma bụ na ọpụpụ ngalaba (.global, .design ,, .cheap) nwere ike ibu ugwo karịa ọnụego ngalaba (.com, .net), ebe ọ bụ na e mepụtara ha n’oge na-adịbeg Image .
ND # MỌD # 1 – gali dar kartą pamatyti naują tinklalapį, bet ne pamatyti bet kokią svetainę, bet ne daugiau kaip „nugrimzti“, bet ne daugiau kaip „Hostinger“. Iji dọta ndị ahịa ọhụrụ, ụfọdụ ụlọ ọrụ Bochum na-enye ndị ahịa ahịa mbụ ngalaba n’efu. Y’oburu na-akwado weebụsaịtị maka oge mbụ, wewere ike ịchekwa ụfọdụ ego site na ịnabata ndị ọbịa weebụ a.
NDMỌD # 2 – „NameCheap na“ – akwado nkwalite pụrụ iche kwa ọnwa – – we we ike ike ike ike ike ike ike ụ ụ t t t ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ n.
Olee otú ịzụta aha ọhụrụ ngalaba si na-edeba aha?
„Nweta ala nke onwe gị ruo ụzọ abụọ:
Ịzụta na ịdenye ngalaba ọhụrụ ọ bụla, ma ọ bụ
Onezụta nke onye ọzọ dar nebuvo ugbu a.
Enwere uru na ọghọm dị na ụzọ abụọ ahụ mana n’ikpeazụ, ọ dị n’aka gị ma ịchọrọ ịkwụ ụgwọ maka adreesị oke ọnụ ma ama ama (ngalaba ndị na-arụ ịrụ) ma ọ kar ọ maka ngalaba ọhụrụ).
Otu ihe ị chọrọ ịtụle bụ otu esi akpọ aha gị.
Dị ka e kwuru na mbụ – Ezigbo aha ngalaba niekada nebuvo ike ịbụ ihe na-ekpebi ihe na-eme ma ọ bụ agbaji ika gị, ya jiri dar aka gị họrọ otu.
1. Lelee maka nnweta nnweta
Ugbu na ị kpebiri na ngalaba aha dị egwu, ọ bụ oge iji chọpụta ma aha ngalaba ahụ ị chọrọ nwere dị ma ma ọ bụ.
Na-enyocha ma ngalaba aha nnweta dị mfe. We dar nebuvo ike ime nchọpụta dị mfe na otu n’ime ngalaba na-edebanye aha; ma ọ bụ, jiri sistemụ ọchụchọ Whois iji nyochaa ma aha ngalaba gị dị ma ọ bụ na e buvo.
Ọ bụr n na ngalaba aha ị chọrọ adịghị adị, gbalịa ịhụ ma ọ bụrụ na mgbatị dị iche dịnụ kama.
Na, kaip ir visa, kas didesnė, nei meilės ženklas „Aha dị Hover“.
2. Debanye aha gị na ngalaba aha na ngalaba na-edeba aha
Aha ngalaba ị họọrọ zuru oke ma kwenyesiri ike na ọ dị, ugbu a ọ bụ oge suderye aha ngalaba n’onwe ya.
Debanye aha ngalaba ma ọ bụrụ na ọ dị.
Mgbe ị debanyere ngalaba aha, ozi niile nke kọntaktị gị na nkọwa nkọwa nwe nkọwa zuru ezu n’ime WHOIS.
Nke a pụtara nkọwa dịka adreesị ozi-e gị, adreesị ụlọ, nọmba ekwentị, wdg, ga-eme ka ndị mmadụ mara.
Ọ ị ụ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ ọ we ọ ọ nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye nye k k k k k k k k k k k k k k k k k k na na na na na na na na na naọ ọ.
Ọnụahịa maka iji ọrụ ndebanye aha nzuzo nwere ike ịdị iche ma na-emekarị, ọ na – pasirodys 10 USD – 15 USD kwa afọ.
Ebe kacha mma ịzụta ngalaba
Niekada nepanašus į aha ngalaba ma ọ bụrụ na ọ dị. Mana, olee otu ị si eme nke ahụ?
Ọzọ kacha mma bụ ịga ụlọ ọrụ na-edeba aha na ngalaba. A ngalaba regsitrar ga-ekwe ka ị denyere aha gị na ngalaba aha ma site kwa afọ sutartys ma ọ bụ o ogologo oge nkwekọrịta.
Ndekọ ngalabaỊnye ọnụahịaNzuzo WHOIS
123 reg £ 11,99 11,99 svarų sterlingų £ 4,99 / afọ
Domenas.com 9,99 USD / afọ 10,99 USD / afọ –
Gandi 12,54 € / afọ 16,50 € / afọ –
Varyk Tėti 12,17 USD / afọ 12,17 USD / afọ 7,99 USD / afọ
Užveskite pelės žymeklį 12,99 USD / afọ 15,49 USD / afọ Laisvas
Aha pigu 10,69 USD / af / 12,88 USD / afọ Laisvas
Ngwọta Ntanetị 34,99 USD / afọ 32,99 USD / afọ 9,99 USD / afọ
Ngalaba na-edebanye aha na ngalaba ga-akwụ gị obere ego nke na-agbaso n’etiti $ 10 – $ 15 kwa afọ, Otú ọ dị, ngalaba aha ndị dị elu na-achọ ga-eri ihe karịa nkwụnye mbụ ahụ.
Ngalaba ị oké ọnụ ahịa re ike iru ọtụtụ puku dollar ma mgbe nke ahụ gasịrị, ụgwọ akwụmụgwọ ahụ bụ ọnụ ọgụgụ dị mma (10 USD – 15 USD kwa afọ).
Mmelitas: Debesų liepsna dị ka ngalaba Aha na-edeba aha
„Cloudflare emeela“ yra „ha-na-edebanye“, o ne „nawe-enweghị ọnụahịa ntinye ego ma na-enye ọnụahịa ahịa maka“ TLD dịka .com, .net, .io, na wdg. Ugbu a, ụrụ ụọụụụụụụị Cloud Cloud Cloudf Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud Cloud de de de de de de de de de aka aka aka aka aka aka aka aka aka aka akaụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụụ.
Na, o ne ikezụta ngalaba aha ozugbo svetainė na onye na-arụ ọrụ weebụsaịtị ma ọ bụ ụlọ ọrụ nhazi?
Ọtụtụ ndị na-ewu ụlọ ọrụ na-enye ikike ịzụta ngalaba ozugbo ị mepụtara saịtị na ikpo okwu ha.
Ụfọdụ ndime na-ewu ụlọ ọrụ kacha mma taa, dị ka Wix arba Obi ọjọọ, ga-enye gị ngalaba aha omenala n’efu maka otu afọ ma ọ bụrụ na ị debanyere atụmatụ ha kwa afọ.
Odịdị, ọọụụụụụụụweweweweweweweikeikeikeikeikeikeikehe n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. 14. $ 14. $ $ 14. 14. 14. 14.ebebebebebebebebebebebebebebeb.
Ø Bu ezie NA o nwere ike Ibu ntakịrị onu ahịa tụnyere ịdenye ngalaba onwe GI, uru NKE ịzụta ngalaba Aha omenala svetainę na onye na-ewu IHE na weebụ Bu na i nwere ike jikọọ na ebe nrụọrụ weebụ GI na ngalaba Aha na Obere nsogbu na -enweghị.
Kedu otu esi zụta aha aha dị ugbu a n’aka onye nwe ya?
Kedu ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịzụta ngalaba na-arụ ọrụ ugbu a?
We ike we ike ọ ị ọ ọ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ụ ike ike ike ike ike ike ike ike ma ma ma ma ma we we ọ ọ ọ ọ ị.
Kedu aha ngalaba aha?
Aha njirimara na-adabere na nnrere nke ndị ọzọ nowere onwe ha nke na-enyere dar žinomas kaip n’ịzụ ahịa nke ngalaba aha na ịntanetị. Ebe ndị a na-enye ụzọ dị mma maka ndị zụrụ ịzụta aha ngalaba site n’aka ndị na-ere ákwà na-achọ ka ha hapha aha ha.
Dabar dar nėra „aha ngalaba aha ndị ọrụ dịnụ“, „mana ebe a bụ ole na ole we we we we::::: Es Es Es: Escrow.com, Sedo, be„ BuyDomains “.
Otu esi zụta ngalaba site n’iji ntu
Ka anyị kwuo na ị chọtara ngalaba aha ma ma gị ma onye ire ere ahụ kpebiri na ego. Sutapimas na-aghọ: Olee otú ị na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ ego ma jide n’aka na onye nwe na-enyefe ngalaba ngalaba gị?
Nke ahụ bụ ebe escrow abata. WeỊwe ike ijijijiụụụcụccjiụjijijijijijijijijijiji””””’ụụụụụụụụụ—————- Kedu ka i si eme nke ahụ? Nke a bụ otú:
Debe azụmahịa n’etiti gị na onye na ere ya
Debanye aha na akaụntụ na saịtị escrow, ma chọpụta okwu nke azụmahịa ahụ n’etiti gị na onye na ere, nke gụnyere aha ngalaba (s) na ire ere.
Mee ugwo gi na ulo ozo
Ozugbo i kpebiri na ego ahụ, ị ​​na-akwụ ụgwọ gị (svetainė na waya, kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ usoro ọ bụla ọzọ) na ụlọ ọrụ ahụ.
Na-esi n’aka onye na-erere gị aha ngalaba ahụ
Mgbe ụlọ ọrụ ahụ na-enweta ma nyochaa ego ahụ, ha ga-ezitere onye na-ere ahịa ka ọ nyefee gị ngalaba aha.
Kwenye na ị natara aha ngalaba aha
Ị ga – ekwenye na ụlọ ọrụ escrow na nwe nke aha ngalaba ahụ ebutela gị. Jiri WHOIS arba WHSR žiniatinklio prieglobos šnipas iji chọpụta ma emelitela profaịlụ onye nwe ma ọ bụ.
Onye na-ere ere na-anata ego svetainė na saịtị ọrụ sąlyginio deponavimo
Ụlọ ọrụ ahụ ga-achọpụta na ahafela ngalaba aha ahụ ma ha ga-enye onye na-ere ya ego ahụ, na-efu ego ha. “
Esi chọpụta uru nke onye nwechara aha ngalaba
Mgbe ị na-achọ maka ngalaba aha mbụ, nke a na-ahụkarị na ọrụ ndị na-ere ahịa, ndị na-ere yea hawe, na ụlọ ahịa ndị ịre ahịa – ị ga-achọpụta na uru ha nrerefere nwere nwere narere ọ bụla svetainė na ole na ole dolerio elu elu elu ma ọ bụ isii ma ọ bụ ọnụ ọgụgụ asaa.
Ndị n we ike g gaghị abụ ebe kachasị mma iji nweta ngalaba aha ma ọ bụrụ na ị na-amalite.
Ot’u otu ihe di ka ogologo, asusu, ihe di iche, na ndu ndi mmadu. Enweghị usoro ọ bụla dar nebuvo inye gị ụgwọ zuru oke. Otú ọ dị, e nwere ụzọ, iji nye gị atụmatụ ntụrụndụ nke aha ngalaba ma ọ chọrọ ntakịrị nyocha nke gị.
1- Iji Na-ere Ndenye Ahịa
Ọchịchị dị mma nke isi iji ghọta otú e si jiri ngalaba kpọrọ ihe bụ site n’ịle ahịa ahịa ndị na-adịbeghị anya. Ile anya na ahịa ndị a na-adịbeghị anya nwere ike ịnye gị otu ụdị ngalaba a na-azụ na maka ole.
Šis DNJournal a ngalaba ahịa akụkọ nke ha na-emelite ma na ya, ha depụtara aha ngalaba ndị na-ere n’oge na-adịbeghị anya site n’aka ọtụtụ ọrụ ngalaba. Mgbe ị na-elele anya, gee ntị na isiokwu nke ngalaba ahụ, ogologo, na ihe ndị ọzọ metụtara ya iji nweta echiche nke otu aha aha njirimara.
„DN Journal“ (2018 m. Gegužės mėn.) „Akụk nchịkwa ahịa mpaghara bipụtara na“
„Nseta ihuenyo nke DN Journal“ „Ngalaba“ pardavimo ataskaita.
Ọ dị mkpa iburu n’uche na akụkọ ahụ na-ekpuchi obere ọnụ ọgụgụ ngalaba aha, ya paprasčiausias, ọ bụghị kpọmkwem ndepụta kachasị.
2- „Iji Ngwudata Atụmatụ Ntanetị Online“
Ụzọ ọzọ iji chọpụta uru nke ngalaba bụ svetainė na ọrụ nyochaa ngalaba ma ọ bụ ngwá ọrụ ọnụahịa. Ebe nrụọrụ ndị a ga-enye gị ohere ịbanye otu aha ngalaba aha ma nye gị ego ị ga-atụ aro maka ya.
Naujųjų laikų „nbime“ žinomas kaip „Estibot“, „WebOutlook“, nėra nauja URL.
Ebe nd a chọpụta uru nke nhalaba na-eji i methatara SEO dị ka ogo ọchụchọ, isiokwu, Alexa ọkwa, nyocha ọ bụla, ọnụ ọgụgụ nke ọchụchọ, na ụgwọ kwa click..
Na, bet ne visada, bet jau nebegalima. Atụmatụ dị mma ga-eji ọtụtụ ebe dị iche iche ma jiri ha tụnyere ịnye gị nyocha dị mma nke aha ngalaba aha.
Tai, kas yra „egowoka maka ịzụta ngalaba aha ma“, niekad neegzistavo, jei ne, bet ne. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta izugbe ngalaba aha, we naujoji ike ịga na saịtị dịka Ebum n’uche arba Zụrụ ngalaba iji nwee mmetụta maka ụgwọ.
Debe na ngalaba, wee banye ọrụ
Svetainė ugbu a, ị ga-enwerịrị ozi zuru oke iji nyere gị dar žinomas kaip denyere aha aha omenala maka akara ma ọ bụ azụmahịa gị onwe gị.
Ma ọ bụ site na ebe nrụọrụ weebụ na-ewu ụlọ ma ọ bụ na ngalaba na-edeba aha saịtị, nwere ngalaba aha kwesịrị ịbụ ihe mbụ ị mechara tupu ị na-ebi ndụ. Ozugbo i nwetara nke ahụ, oge eruola ka ị lekwasị anya iwu ulo oru gi.
* Mmelite: Ezinyere eziokwu na stats ụlọ ọrụ ọhụrụ. Ọ laghachi az 1985 na
* Mmelite: Ezinyere eziokwu na statistici ụlọ ọrụ ọhụrụ. Ọ Laghachi azụ na 1985
* Mmelite: Ezinyere eziokwu na stats ụlọ ọrụ ọhụrụ. G laghachi azụ na 1985
* Mmelite : Ezinyere eziokwu na 통계들 ụlọ ọrụ ọhụrụ. Laghachi azụ na 1985
* Mmelite：Ezinyere eziokwu na statsụlọọrụọhụrụ. Ọlaghachiazụna 1985 mgbe aha ahambụna site na mgbeahụ、Intanetachọpụtawoọganihudịukwuu nke
آیا تاکنون خواسته اید وبلاگ خود را شروع ی د آ ا ا ا
[Пример из практики] Как я разработал и продал BloggingTips.com за 60 000 долларов
Tiga Cara Mudah MembuatのウェブサイトSendiri：Panduan Langkah demi langkah
6 Modi kif issuq aktarメール登録fuq il-BlogTiegħek